China SHTDN Twin Screw Extruder Gearbox orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Nanjing Zhitian
Twin Screw Gearbox dia mandray ny fenitra ISO1328 farany teo, ny fiasan'ny varingarina vita amin'ny boloka, ary ny fampifangaroana ny traikefa maharitra sy ny fahaizan'ny extruder an'ny kambana kambana, ny boaty SHTDN dia namboarina tamim-pitandremana miaraka amina hevitra avo lenta avo lenta eran'izao tontolo izao ho an'ny visy kambana miodina. extruder, miaraka amin'ny zon'ny Intellectual Properties tsy miankina tanteraka.
Mena na Fotsy
Lisitry ny fandefasana:
Gearbox (ao anatin'izany ny vatana salantsalany, ny rafitra menaka ivelany), ny famaritana ny vokatra, ny fitambarana tombo-kase misy menaka.
---- Ny famolavolana kapila indroa dia ahafahan'ny axe B tarihin'ny fitaovana roa tsy hampitombo ny sakan'ny nify.---- Ny firafitra tsara indrindra sy ny fivorian'ny sarotra dia mitarika amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana.---- Ny bearings rehetra dia nalaina avy amina marika ekena eran'izao tontolo izao, noho izany dia miorina tsara ny tsela output.--- Famolavolana mirindra, ny faran'ny fonosana boaty dia azo sokafana, mora apetraka ary soloina.
Gearbox ExtruderKitapo maotera extruder kambanaVata famindrana herinaratra avo lenta
SHTDN Twin Screw Extruder Gearbox Fampidirana
Ny peratra dia vita amin'ny vy vy karbaona vita amin'ny alàlan'ny alàlan'ny kalitao avo lenta amin'ny alàlan'ny fanodinana sy famonoana ho an'ny nify, izay ny fizotran'ny fikosoham-bary rehetra dia vitaina amin'ny milina fitotoana entana. Ny masontsivana Gear dia nohamarinina ary natao manokana ho an'ny toetoetran'ny extruder kambana kambana, mampihena ny fifantohana amin'ny adin-tsaina amin'ny fakan'ny fitaovana sy ny fanatsarana ny fiparitahan'ny sehatry ny fitaovana. Nohatsarainay ny firoboroboan'ny vatan'ny havizanana, ny tanjaky ny havizanana ary ny refin'ny savaivony. Noraisinay ihany koa ny hevitra sy ny haitao farany momba ny fitsaboana ny fanafanana ny firafitry ny kodiarana, noho izany dia niantoka ny fitaovana avy amin'ny fitoviana sy ny tanjaka.
SHTDN Gearbox Power & Torque latabatra
Torque Torque (T / A3)
Misafidiana kalitao avo lenta sy hamafin'ny fitaovana vy.
Mang napetraka fitaovana milina marokoroko, toy ny fikosoham-bary amin'ny karazana Gantry, fandoroana radial, sns.
Andiana fitaovana famaranana maro, toy ny milina fitotoan'ny cnc, milina manahirana NC, sns. Fanodinana bebe kokoa amin'ny fomba fiasa miasa tsirairay, avo kokoa ny marina, ianao irery ihany.
Fitaovana fanadinana avo lenta sy fitaovana, ekipa fanaraha-maso andiany, ny endrika boaty, ny halavirana afovoany, ny lavaka anatiny ary mankamin'ny fomba manaraka, aorian'ny fizahana sy fanitsiana.
Fivoriambe mahery vaika sy ekipa R&D, ireo ampahany dia hangonina arakaraka ny sary, isaky ny dingana fanamarinana, amin'ny alàlan'ny fitsapana mihodina aorian'ny vokatra vita.
Manondraha fonosana, fonosana, ampiasaina any amin'ny farany ambany amin'ny takelaka voafetra, ataovy izay hahazoana antoka fa tsy miova amin'ny fitaterana ny peoduct.
Previous: 2020 Gearbox tsara kalitao ho an'ny Twin Screw Extruder - STD Twin Screw Extruder Gearbox - Nanjing Zhitian
Manaraka: STD Twin Screw Extruder Gearbox
Extruder Gearbox Fa Pvc Product
Gearbox Extruder Extruder Twin Screw
SANB Three Screw Gearbox ho an'ny famenoana avo / Maste ...
Barika Screw Extruder, Extruder Screw Double, Barika ho an'ny Twin Screw Extruder, Barika visy ho an'ny fanodinana, Tex65aii Screw Segment, Shaft WR15E,